Mpandika tranonkala noforomporina nohazavaina tamin'ny Semalt
Famaritana Data isan-karazany amin'ny Internet
Isaky ny manokatra pejy vaovao amin'ny Internet ny tranokala , ny mpampiasa dia mila manaisotra singa. Rehefa avy namorona drafitra iray dia tsy maintsy mamorona sela ny mpampiasa. Izy ireo dia singa ao amin'ny tranonkalan'ny vondron'ny rakitra sasantsasany. Ireo mpampiasa dia afaka manampy, manitsy na mamafa ireo mpihidy amin'ny alalan'ny tontonana. Ireo mpampiasa dia afaka mampiasa ity fitaovana maoderina ity mba hanangonana karazana tahiry samihafa, toy ny votoatiny, latabatra, sary, nomeraon-telefaona, vidiny sy maro. Rehefa avy nanangona ny fampahalalana ilainy izy ireo, dia afaka mandefa ny valiny amin'ny TSV ny Clipboard ary mamonjy azy ireo any amin'ny folders, na manondrana ny valiny amin'ny Google Docs amin'ny Spreadsheet Excel.
Fikarohana amin'ny alalan'ireo fitaovana samihafa
Raha mampiasa ity fitaovana ity dia afaka mivezivezy eo amin'ny sokajy samihafa sy ny sokajy samihafa ny mpikaroka amin'ny Internet.Azonao atao, ohatra, izy ireo mifidy singa roa mifandray: ny iray ho an'ny sokajy lehibe ary ny iray hafa ho an'ny sokajy. Amin'izany fomba izany dia azo atao ny mivezivezy ao amin'ny tranonkala samihafa ary manaisotra ny URL.
Fomba handaminana ny fanindrahindrana
Ankehitriny, maro ireo e-shops sy mpivarotra manana sokajy maromaro ao amin'ny tranonkalany. Ny mpampiasa dia mila manapa-kevitra ny sokajy tiany hampiasaina. Ny vondrona tsirairay dia manana ny lisitry ny vokatra miaraka amin'ny rohy pagination. Ankoatra izay, mila mahatsiaro ireo mpampiasa fa misy pejy sasantsasany izay tsy misy afa-tsy amin'ny pejy pagination fa tsy avy amin'ny sokajy manokana. Izy ireo dia tsy maintsy manomboka amin'ny famoronana sitemap (drafitra) ary manomboka zavatra entina. Mba hanaovana izany, dia tsy maintsy manamboatra fifandraisana Link izy ireo amin'ny fisafidianana ny rohy pagination. Mila mahatsiaro ny mpampiasa fa rehefa manokatra sokajy manokana ny tranokala, dia tsy afaka manangona zavatra avy amin'io pejy manokana io ihany. Avy eo, afaka mampiasa ny rohy misy pagination mety izy. Ireo rohy ireo dia afaka mahita ireo angona mifandraika bebe kokoa, ary koa ny rohy maromaro kokoa ho an'ireo mpampiasa.
Ity fitaovana mahavariana ity dia misy endri-javatra lehibe, ary afaka manampy ny mpikaroka web hanangona ny valiny tadiaviny izy ireo, mba hamakafaka azy ireo taty aoriana. Fitaovana tsotra izay tsy mitaky coding izany ary ny mpampiasa dia tsy mila manana fahaizana momba ny programa fampiroboroboana. Io no tranonkala maimaim-poana maimaim-poana Chrome extension ho an'ireo tsy mpandrindra izay te-hanangona ny angon-drakitra avy amin'ny tranonkala iray tsy misy mpandraharaha amin'ny tranokala. Izy ireo dia tsy maintsy mampiasa ny navigateur Google Chrome amin'ny fananganana azy.